आज फेरी बढ्यो सं’ क्रमित संख्या , कति पुग्यो ? – Suchana Hub
आज फेरी बढ्यो सं’ क्रमित संख्या , कति पुग्यो ?
काठमाडौ । कोरोना भाईरस सबैभन्दा पहिले गत डिसेम्बर चीनको उहानमा देखिएको थियो । त्यसबेला चीनलाई नराम्रोसँग अ* सर पारेको उक्त भाइरसले अहिले म*हामा*रीको रु* प लिएको छ भने विश्वव्या* पी रु*पमा फैलिरहेको छ। कोरोना भाईरस सं*क्रमित तथा यसबाट मृ*त्यु हुनेको संख्या प्रत्यक दिन ब* ढिरहेको छ । कोरोना भाईरसले २ सय १० देश तथा क्षेत्रमा आफ्नो आ*तंक फैलाइसकेको छ भने १ करोड भन्दा बढी व्यक्तिमा सं* क्रमण भईसकेको छ । त्यस्तै गरि ५ लाख भन्दा बढी मान्छेको ज्या* न लि*इसकेको यस भाइरसले अहिले सबैलाई त्र* सित बनाएको छ । कोरोना भाइरसको त्रा* स नेपालमा पनि कम छैन । दिनहुँ रुपमा सयौं सं*क्रमित थ* पिने क्र* म जा* री रहेको छ भने अहिलेसम्म नेपालमा सं*क्रमितको संख्या १४ हजार ना* घिसकेको छ ।
आज बुधबार मात्र पनि ५ सय २२ जनामा थप सं* क्रमणको पु* ष्टि भएको छ । सं *क्रमितको थप विवरण भने आउन बाकी नै रहेको छ । यद्धपी सबै सं* क्रमितहरु अहिले स्वास्थ्य कर्मीको सम्पर्कमा भएको र सबैको अ* वस्था सामान्य रहेको बताइएको छ । यससँगै नेपालमा कुल सं* क्रमितको संख्या १४ हजार ८६ पुगेको छ भने ३० जनाको कोरोना सं* क्रमणका कारण मृ* त्यु भएको छ । त्यस्तै गरि ४ हजार ६ सय ५६ जना सं* क्रमितहरु भने सफल उपचार पछि नि* को भएर घर फर्किसकेका छन् । अहिले ९ हजार ३ सय ६० जना सं* क्रमितलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिँदैछ । नेपालमा अहिले सम्म कूल ३ लाख ६ सय २० जनाको आर डी टि टेस्ट गरिएको छ भने २ लाख ३३ हजार २ सय २७ जनाको पी सी आर विधीबाट परिक्षण गरिएको छ ।
त्यस्तै गरि विभिन्न ठाउमा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा गरेर कूल ४८ हजार ३ सय ६२ जना व्यक्ति अहिले क्वारेन्टाइनमा रहेको स्वास्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। सं* क्रमित व्यक्तिहरुलाई भने आफ्नो आफ्नो जिल्ला तथा प्रदेशमा बनाइएको कोरोना विशेष अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको विशेष नि* गरानीमा राखिएको छ भने ती सबैको स्वास्थ्य अ* वस्था सामान्य रहेको बताइएको छ । एकातिर सं* क्रमितको संख्या ब ढ्दै छ भने अर्को तिर कोरोना सं* क्रमणलाई प*राजीत गरेर निको भइ घर फर्कनेको संख्या पनि ब *ढी नै रहेको छ । कोरोना सं* क्रमणको नि* यन्त्रण तथा रो* कथा* मका लागी यतिबेला प्राय सबै मुलुकमा लकडाउनको घोषणा गरिएको छ । यसले अहिले सिङ्गो संसार तथा मानव जातिको जनजीवन प्र* भावित बनाएको छ भने सबै यहि म*हामा* री वि*रुद्ध नै ल*डिरहेका छन् ।
नेपालमा केहि दिन यता उल्लेखीय मात्रामा सं* क्रमितको संख्या बढ्न थालेको हो । भारतबाट अहिले नेपाल भित्रनेको संख्या बढे सँगै अहिले नेपालमा धेरै मानिसमा सं* क्रमणको पु* ष्टि भैरहेको छ । सं* क्रमितको संख्या ब*ढेसँगै अहिले नेपालमा त्रा*स थपिएको छ भने अझै निकै सं* क्रमित थ* पिने आ*शंका गरिएको छ । अहिले सं* क्रमित थपिए सँगै परिक्षण पनि ब* ढी नै गर्न थालिएको छ भने यससँगै यसको नि* यन्त्रणका लागी नेपालमा लकडाउनको अ* वधी पनि पटक पटक थप्पी नै रहेको छ। यस सँगै नेपालस्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का प्रतिनिधि जस भ्यान्डेलरले नेपालमा कोरोना भाइरसको सं*कट अझै चु* लिन सक्ने तर्फ अहिले सबैलाई स*चेत गराएका छन् । यसका साथै अब सबैले नयाँ तरिकाले बाँ* च्न सिक्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
फैलिएको ६ महिना क* टिसक्दा पनि यस भाईरसबाट ब* च्न अहिलेसम्म कुनै पनि औषधी तथा खोप भने बनेको छैन । यस विश्वव्यापी म*हामा* रीको रुपमा फैलिरहेको कोरना भाइरसको त्रा* स नेपालमा पनि ब* ढिरहेको छ । अहिले सं*क्रमित थ* पिए सँगै परिक्षण पनि ब*ढी नै गर्न थालिएको छ भने यससँगै यसको नि* यन्त्रणका लागी नेपालमा लकडाउनको अ* वधी पनि पटक पटक थप्पी नै रहेको छ। असार १ गतेदेखि नेपालका केहि स्थानमा लकडाउन केहि खु* कुलो गरिएको भएपनि पूर्ण रुपमा लकडाउन खुलेको भने छैन । चैत्र ११ गतेदेखि गरिएको लकडाउन पटक पटक थ* पेर जसाउन ७ गते सम्मलाई तो* किएको छ भने लकडाउनले सबैलाई अ* सर पारेको छ । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ ।
Tags: corona, nepal
Previous एक्स- रे गर्ने ब’ हानामा युवतीलाई ना’ ङ्गो बनाउन खोज्ने स्वास्थ्यकर्मी प’क्राउ
Next २३ वर्षीया एलिसा गौतमले फेसबुकबाट लाइभ गरेर गरिन देहत्याग , भिडियो सहित